के राजकिशोर यादवको नेतृत्वमा फेरि फुट्दै छ जसपा ?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा सरकारमा सहभागी हुनेबारे आन्तरिक किचलो बढ्दो छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन धेरैजना आकांक्षी भएपछि जसपामा आन्तरिक किचलो बढेको बताइन्छ । स...
पछिल्लो समयमा भएका धेरैजसो हत्याकाण्डमा नातेदारकै संलग्नता बढी पाइएको छ । प्रहरी मुख्यालयको एक तथ्यांकअनुसार देशमा आफ्नै परिवारभित्रबाट आफन्तको हत्या गर्ने काम भइरहेको छ । पुस महिनाको अन्तिम साताको कुर...
राजधानीमा ‘पोल्यान्ड’ प्रयोग अत्यधिक !
आइतबार राजधानीको कलंकीबाट अवैध लागुऔषध ‘पोल्याण्ड’ बरामद भयो । नेपाल प्रहरीले राजधानीबाटै पोल्याण्डसहित एक जनालाई आइतबार नियन्त्रणमा लियो । विशेष सूचनाको आधारमा राजधानी प्रहरीले कलंकीब...
संखुवासभाको मादी नगरपालिका-१ स्थित उम्लिङमा भएको एकै परिवारका ६ जनाको विभत्स हत्या घटनामा सात दिनपछि प्रहरीले दोषी सार्वजनिक गरेको छ । संखुवासभा प्रहरीले इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी २६ ...